Izibalo Zokumaketha Nge-imeyili | Martech Zone
Izibalo Zokuthengisa ze-imeyili
NgoLwesine, Januwari 10, 2019 NgeSonto, uJanuwari 13, 2019 Douglas Karr
I-imeyili iyaqhubeka nokuhola isu lokukhulisa nokugcina cishe wonke amabhizinisi aku-inthanethi. Iyabiza, kulula ukuyisebenzisa, iyalinganiswa, futhi iyasebenza. Kodwa-ke, uma izinhlangano zisebenzisa kabi le ndlela, izoba nemiphumela.
Ugaxekile ongaceliwe awusalawuleki futhi amabhizinisi amaningi aqhubeka nokwephula imigomo yesevisi yabahlinzeki be-imeyili nohlu lokungenisa. Ngokwenza lokhu, behlisa isithunzi se- idumela le-imeyili webhizinisi labo nama-imeyili abakhethe ukungena kuwo, ababhalisile ababalulekile ababonwa. Ziya ngqo kufolda engenamsoco.
Ngokwale infographic, Ukumaketha Nge-imeyili Izinombolo: Ukutshalwa Kwezimali Okuhlakaniphile, kusuka kuCampaign Monitor, nazi izibalo zakamuva zokumaketha nge-imeyili:
Njengo-2018, ngaphezulu kwabantu abayi-3.8 billion emhlabeni wonke basebenzisa i-imeyili. Leyo yingxenye yenani labantu emhlabeni!
Abasebenzisi kaningi bane- ngaphezu kwekheli le-imeyili, isilinganiso siyi-1.75.
Abasebenzisi bathumela iqembu Ama-imeyili angama-281.1 billion nsuku zonke, 195 million njalo ngomzuzu.
Amazwe amahlanu (i-China, i-United States, i-Germany, i-Ukraine kanye ne-Russia) abe yingxenye yomhlaba ugaxekile we-imeyili.
The isilinganiso se-imeyili sokuchofoza (CTR) eNyakatho Melika ingu-3.1%, ingu-4.19% e-United Kingdom.
Mhlawumbe izibalo ze-imeyili ezibaluleke kakhulu ezabiwe: abathengi abeza kusayithi lakho futhi uthenge ngesixhumanisi se-imeyili chitha, ngokwesilinganiso, ngaphezulu kwe-138% kunamanye amakhasimende!
Nayi i-infographic ephelele evela eqenjini ku- Umkhankaso Wokumkhankaso:
Tags: isilinganiso ctrimeyili Marketingizibalo zokuthengisa nge-imeyiliimeyili evulekile amazingaizibalo ze-imeyilimangaki ama-imeyili athunyelweamanani avulekile